उत्तर कोरियालाका सर्वोच्च नेता उन विरुद्ध कमान्डो सिक्स परिचालित ! – लोकल खबर अनलाईन
उत्तर कोरियालाका सर्वोच्च नेता उन विरुद्ध कमान्डो सिक्स परिचालित !
Posted by: Local Khabar in लोकल खबर, समाचार September 29, 2017	563 Comments 2,374 Views
एजेन्सी । अमेरिकी प्रशासनको सबैभन्दा भरपर्दो र शक्तिशाली सैन्य कमाण्डो उत्तर कोरियालाका सर्वोच्च नेता किम जोन उन विरुद्ध परिचालित भएको खबरले विश्व राजनीति तातिएको छ । दक्षिण कोरियाको दक्षिण कोरियाको जुंगआंग दैनिकले कमान्डो सिक्सलाई किम जोन उन हत्याको लागि सुपारी दिइएको समाचार प्रकाशित गरेपछि नयाँ तरंग पैदा भएको हो ।
अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए तथा दक्षिण कोरियाली खुफिया एजेन्सी दुवैले किम हत्याका लागि यो कमान्डोलाई सुपारी दिएको पत्रिकाको दाबी छ । यो कमान्डो काम कारवाही अति गोप्य हुने गरेको छ। कहाँ कहिले के कारवाही हुँदैछ भन्ने विषय अत्यन्त गोप्य राखिन्छ। यो कमान्डोको आक्रमण पूर्वजानकारी दिएर हुने गरेको छैन। तर जब आक्रमण गर्छ जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किन्छ।
उत्तर कोरियाको समाचार संस्थाहरुले समेत सो पत्रिकाको समाचारलाई पत्याएको देखिएको छ। समाचार प्रकाशनपछि किमको सुरक्षा कडा पारिएको छ। उत्तर कोरियाली समाचार संस्थाका अनुसार मार्शल किम जोन उनले नेवी सीलको अपरेसनबारे तथ्यगत सूचना संकलन गर्न आदेश दिएका छन्। तत्कालको खतरालाई ध्यानमा राख्दै किमका सुरक्षा सल्लाहकारले उनलाई भिडभाडबाट टाढै रहन सल्लाह दिएका छन्।
तस्वीरहरु: ईन्टरनेटबाट ।
एजेन्सी । अमेरिकी प्रशासनको सबैभन्दा भरपर्दो र शक्तिशाली सैन्य कमाण्डो उत्तर कोरियालाका सर्वोच्च नेता किम जोन उन विरुद्ध परिचालित भएको खबरले विश्व राजनीति तातिएको छ । दक्षिण कोरियाको दक्षिण कोरियाको जुंगआंग दैनिकले कमान्डो सिक्सलाई किम जोन उन हत्याको लागि सुपारी दिइएको समाचार प्रकाशित गरेपछि नयाँ तरंग पैदा भएको हो । अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए तथा दक्षिण कोरियाली खुफिया एजेन्सी दुवैले किम हत्याका लागि यो कमान्डोलाई सुपारी दिएको पत्रिकाको दाबी छ । यो कमान्डो काम कारवाही अति गोप्य हुने गरेको छ। कहाँ कहिले के कारवाही हुँदैछ भन्ने विषय अत्यन्त गोप्य राखिन्छ। यो कमान्डोको आक्रमण पूर्वजानकारी दिएर हुने गरेको छैन। तर जब आक्रमण&hellip;
Previous: विश्वकै प्रेरणादायी तथा सृजनशील महिलाहरुको सूचीमा मगर !
Next: क्यान्सर रोगबाट पीडित मुनालको निधन